Avy any Thailand ka hatrany Malaysia ~ Journey-Assist - Avy any Malezia ka hatrany Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Avy any Thailand ka hatrany Malaysia
Avy any Thailand ho any Malaysia amin'ny fiaramanidina
Misy sidina mivantana mankany Kuala Lumpur avy any amin'ny seranam-piaramanidina any Phuket. Ny Air Asia izy ireo no mihetsika. Fialana - amin'ny 8 ora eo ho eo, miverina - amin'ny tolakandro. Nony tonga tany Malezia dia voatsindrina ilay pasipaorony tamin'ny pasipaorony milaza fa nandao an'i Thailand izy. Mila fotoana kely ny fisafoana eny amin'ny seranam-piaramanidina, ny 1 ora 20 minitra. Mba tsy hananana olana amin'ny sidina, ilaina ny fisoratana anarana ao amin'ny vavahadin-tserasera amin'ny fiaramanidina ary ny fanaovana pirinty tsy miankina. Amin'ity tranga ity dia azo atao ny misoroka ny filaharana eo amin'ny lisitry ny fanamarinana tampoka, mizotra avy hatrany ny fanaraha-maso pasipaoro ary avy eo mankany amin'ny faritra fialana. Buy tapakila dia tokony ho aloha mba hahazoana antoka ny tenanao amin'ny vidiny mora indrindra.
Mbola lavitra dia lavitra ny dia. Tsy misy sidina mivantana, fa ny dia mandritra ny ora maro eo amin'ny varavarankely no ahafahanao mahita ireo tany mahafinaritra ao amin'ireo firenena roa ireo. Misy fomba roa hahatongavana any Malaysia amin'ny lamasinina.
Ny fiaran-dalamby dia miainga avy amin'ny gara lehibe ao Bangkok, antsoina hoe Hua Lumphong, ary eo akaikin'ny tanànan'i China. Ny dia mankany amin'ny tanànan'ny sisin-tanin'i Hat Yai dia 18 ora eo ho eo, ny vidin'ny tapakila manomboka amin'ny 300 ... 1 baht ary voafaritry ny kilasy fiaran-dalamby sy sarety. Avy eo tsy maintsy mamindra amin'ny fiaran-dalamby ianao izay mankany amin'ny gara lehibe any Kuala Lumpur. Ny tapakila iray dia mitentina 500 tapitrisa dolara, ary 60 ora eo ho eo ny dia.
Fomba iray hafa koa ny fandehanana amin'ny. Penang. Avy any Bangkok, isan'andro amin'ny 14.45 ny fiaran-dalamby hiainga ao Butterworth (ny fotoana hahatongavana dia 12.20). Vidiny tapakila - 1 000 ... 1 baht (faritanin'ny kilasy fiaran-dalamby). Butterworth manana fijery mahaliana roa. Raha manana fotoana eo anelanelan'ny sidina ianao, dia afaka mitsidika ny Temple of the Nine Gods, ary koa ny Botanical Park. Avy eo, ny mpizahatany dia afaka misambotra sambo fantsona mankany Georgetown ary miverina isan'andro isan'andro amin'ny 500 ka hatramin'ny 05.30. Mitentina 01.00 dolara eo ny vidin'ny sambo mankany Georgetown, ary maimaimpoana maimaimpoana ny lalana Butterworth.
Ho an'ireo mpizahatany izay tsy tia ny làlan-drano, ny fitsangatsanganana bus mankany Kuala Lumpur no safidy tsara indrindra. Saika adiny iray dia misy bus iray avy amin'ny gara fitateram-bahoaka, ny saran-dalana izay eo amin'ny 400 baht eo ho eo.
Ny tapakilan'ny fiaran-dalamby dia tokony hovidina ao amin'ny tranokalan'ny orinasam-piaramanidina mialoha ny fitsangatsanganana an-dalambe, satria takiana tapakila miverina hamelabelatra any Malaysia
Mba hisafidianana lamasinina dia tokony hainao tsara ny karazany. Ny karazana fiaran-dalamby no mamaritra ny faharetan'ny dia:
fanehoana manokana - fampiononana avo, fijanonana vitsivitsy;
maotera maotera - fiara mandeha maotera;
haingana - kilasy fenitra;
lamasinina mahazatra - miaraka amin'ny kojakoja kely, mitovy amin'ny fiaran-dalamby eto amintsika.
Miakatra isan-taona ihany koa ny vidin'ny tapakila.
Bus any Malaysia
Ny fialana any Phuket mankany Malaysia dia azo aleha amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny fihetsika dia midika fitaterana. Ny fiara fitateram-bahoaka sy ny minivana dia miala amin'ny biraon'ny Bus Bus Phinet. Raha resaka fitetezam-paritany miaraka amin'ny valizy, dia tokony misafidy ny fiara fitateram-bahoaka ianao. Ny saran-dalany dia eo amin'ny laharana 350 ... 500 baht. Ny dia mankany amin'ny tanànan'ny sisin-tanin'i Hat Yai dia maharitra 8 ora eo ho eo. Ny fotoana fandaozana ny fiara fitaterana voalohany dia 7.30, ny farany - 21.45. Rehefa tonga any Hat Yai ianao dia mila famindrana any anaty fiara fitaterana mankany Kuala Lumpur. Ny tapakila ho an'ny fiara fitateram-bahoaka ity dia tokony hovidina amin'ny Internet any Phuket mba hialana amin'ny fandaniam-potoana hitadiavana orinasa Maleziana mivarotra tapakila eo an-toerana. Handany 10 ora ny dia mankany Kuala Lumpur, ny vidiny dia 500 ka hatramin'ny 600 baht.
Azo atao koa ny mandeha ho any Malaysia amin'ny fiara fitaterana mankany Bangkok. Mijanona isan'andro ny fiara fitateram-bahoaka any Sai Mai Tai ao Kuala Lumpur, ao amin'ny Fr. Penang sy momba ny. Langkakvi. Azo atao ny mividy tapakila eny amin'ny masoivoho fitaterana eo an-toerana na mivantana any amin'ny gara fitateram-bahoaka. Ny vidiny dia lafo lavitra raha oharina amin'ny lamasinina na fiaramanidina. Raha mandeha any Langkakwi ianao dia mila mitondra fiara 17 ora vao miova mankany Satun (vohitra iray any atsimo andrefan'i Thailand). Avy eo avy amin'ny sidina dia hisy ferry amin'ny sidina iray amin'ny efatra ary rehefa afaka 1 ora sy 15 minitra dia ho any Malezia ianao.
Mila mandeha any Kuala Lumpur avy any Bangkok ianao, miova mankany Hat Yaya. Rehefa afaka 12 ora dia ho any an-drenivohitra Maleziana ianao.